Flat Heat Press Machine, Mucheka Roller Heat Press Machine, Heat Press Machine - Asiaprint
Akangwara Kudzora Jersey Calandra Isa Heat P ...
Guangzhou AsiaprintMaindasitiri Co., Ltd.
Yakagadzwa muna 2016, Guangzhou Asiaprint Industrial Co, Ltd. yave ichive iye mutungamiriri we heat heat sublimation technology. Isu tinopa kupisa muchina wekuchinjisa muchina, sublimation yekudhinda muchina, DTF yekudhinda muchina, fusing muchina, embossing muchina, dryer, sublimation bepa, inki nezvimwewo Zvakawanikwa muGuangzhou, China, tinoita zvemhando kutonga uye kuyedza pano tisati tatumira kuve nechokwadi kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana. izvo zvinodiwa nevatengi vedu.
Rutsigiro rwehunyanzvi pa-line runogona kupihwa munguva
uye vashandi vachafara chaizvo kukubatsira.
Isu tiri mutungamiri weanopisa michina yekudhinda muChina.
Yedu yekupisa yekudhinda michina ndeye CE setifiketi.
Isu tinopa online sevhisi maawa makumi maviri nemasere, mazuva manomwe pavhiki.